Xoolaleyda oo wacad ku mareen inay iska dhiciyaan al-Shabaab
Dagaal xooggan oo u dhaxeeyay xubno ka tirsan ururka dilaaga ah ee al-Shabaab iyo xoolaley ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay deegaanka Ceel Cadde ee gobalka Gedo.
Dagaal ayaa la sheegay inuu bilowday kaddib markii xubnaha al-Shabaab ay damceen inay xoola ka dhacaan xoolaleyda balse waxaa la sheegay inay diideen in xoolahooda la iska qaato.
Guddoomiyaha deegaanka Ceel Cadde ee Gobolka Gedo Cabdirashiid Cali Cabdi Qoorleex ayaa sheegay in dadka xoolo dhaqata ay la dagaalameen al-Shabaab, islamarkaana waxaa uu ku baaqay in taageero dheeraad ah la siiyo dadka shacabka ah ee dagaalka kula jira dagaalamayaasha al-Shabaab.
Sidoo kale guddoomiyaha ayaa sheegay in hadda xaaladda ay dagan tahay, islamarkaana ay dhaq-dhaqaaqyo xooggan ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Gedo.
Horay ayaa waxaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ka dhacay dagaalo u dhaxeeyay al-Shabaab iyo dad is aruusaday oo la magac baxay Macaawiisleey, kuwaas oo sheegay inay Shabaab dhibaato kala kulmeen.
Al-Shabaab ayaa xoola dhaqatada iyo beeraleyda ka qaado lacago ay ku sheegeen inay yihiin sako balse ay dadka shacabka ah ku sheegeen in la xalaaleysanayo dhaca xoolahooda.